January 11, 2022 - Online Hartha
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်ကျော်လောက်က..မန္တလေးမြို့အတွင်းမှာ လိုက်လံတောင်းစားနေတဲ့..ကလေးလူကြီး တော်တော်များများကို တွေ့ဆုံပြီး.. သူတို့အတွက်အလုပ်ရရှိရေး..စားဝတ်နေမှု၊ အဆင်ပြေရေး..တို့အတွက် ကျတော်နဲ့ ကျတော်တို.ရဲ့ ဆရာတွေ စုပေါင်းပြီး သုတောင်းစား တော်တော်များများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ ညဈေးတန်းမှာတောင်းစားနေသူများ၊ မိန်းထဲမှာ..တောင်းစားနေသူများ၊ ရတနာပုံဈေး အနီးတဝိုက် တောင်းစားနေသူများ၊ ဘုရားကြီး.အနီး.ပတ်ဝန်းကျင်တောင်းစားနေသူများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တော့ သူတို့အားလုံး..ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ ဒါကြောင့်.သူတို့တွေနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် အလုပ် နေရာတော်တော်များများကိုလည်း အစကတည်းက ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ တော်ကြာ အလုပ်နေရာ မရှိလို့ မလုပ်ချင်ဘူးလို့ ပြောမှာ စိုးလို့ပါ။ အဆုံးသတ်.ကတော့…မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ တောင်းစားသူများကို လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ တောင်းစားသူအများစုမှာ မိသားစုလိုက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ တကယ်..မရှိလို့တောင်းစားတဲ့လူတွေလည်း မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် အရမ်းနည်းလွန်းပါတယ်။ ကျတော်တို့တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းတဲ့မိသားစုတစ်စုဆိုရင် သူတို့တစ်အိမ်လုံးရဲ့ တစ်ရက် ဝင်ငွေဟာ. အနည်းဆုံး တရက်၅၀၀၀၀ကျပ် … Read more
ဒီကနေ့ လူတွေအများအားဖြင့် အသားအရေဆိုင်ရာ ပြဿနာအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ အမည်းစက်တွေ၊ အညစ်အကြေးတွေ၊ မှဲ့ခြောက်တွေနဲ့ ဝက်ခြံပြဿနာတွေပါ။ ဒါ့ကြောင့် အသားအရေဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို အမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက် သဘာဝနည်းလမ်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို အရင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ ရေ ၂၀၀ မီလီလီတာ နံနံရွက် တောက်တောက်စဉ်း စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း သံပုယိုရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း (သံပုရာရည်ကို အစားထိုးသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။) ပြင်ဆင်ခြင်း အရင်ဆုံး အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ရေထည့်ပြီးအပူပေးပါ။ ပြီးရင် ပွက်ပွက်ဆူလာတဲ့ထိ ထားပေးပါ။ အဲဒီနောက် နံနံပင်ရွက်ကို ထည့်ပေးပြီး အပူရှိန်လျှော့ကာ ၁၅ မိနစ်လောက် ထားပေးပါ။ အဲဒီနောက် မီးဖိုပေါ်ကချပြီး အေးအောင်ထားပါ။ အဲဒီနောက် ရေဆစ်ချပြီး သံပုယိုရည်ထည့်ပေးပါ။ အဲဒီနောက် အဖုံးပါတဲ့ ခရားတစ်လုံးထဲ ပြောင်းထည့်ပြီး … Read more
၅ နှစ်အတွင်း အမြန်ဆုံး ပိုက်ဆံချမ်းသာမယ့် နည်းလမ်း
လူတိုင်းက ချမ်းသာချင်ကြပါတယ်။ကြိုးလည်းကြိုးစားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတော်တော်များများကို မေးကြည့်လိုက်ရင် ငါတစ်နေ့ချမ်းသာရမယ်လို့ပဲ ဖြေကြတယ်။ တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခုကိုမရဘူး။ တစ်နေ့ကြရင်ဆိုတော့ နောင်(5)နှစ် (10)နှစ်လဲ မသေချာပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကြိုးစားရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားမှာပါပဲ။ ကိုယ်ကတကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင်တော့ တိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ၁။ “ကိုယ်က ငွေပမာဏဘယ်လောက်ထိ ပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲ ဆိုတာသိရပါမယ်” ၂။ “အဲ့ဒီငွေပမာဏကို ဘယ်အချိန်မှာပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲဆိုတာ သိရပါတယ်” ၃။ “ကိုယ်လိုချင်တဲ့ငွေပဏနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာကို စာအုပ်ထဲမှာချရေးရပါမယ်” ၄။ “ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပမာဏနဲ့ အချိန်ကိုတွက်ပြီး ပထမနှစ်မှာဘယ်လောက်၊ ဒုတိယနှစ်မှာဘယ်လောက်ဆိုပြီး နှစ်အလိုက်ပြန်ခွဲရေးပါ” ၅။ “(၁)နှစ်မှာဘယ်လောက်ရှာရမယ်ဆိုတာကို သိပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်လက်ရှိအလုပ်နဲ့ဝင်ငွေက ထိုပမာဏကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ကနောက်ထက် ထိုပမာဏကိုရနိုင်မဲ့ အလုပ် ဝင်ငွေတွေကိုထပ်ပြီး ဖန်တီးရပါမယ်” ဒါကြောင့် (၅)နှစ်အတွင်းမှာ အောင်မြင်ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ငွေပမာဏနဲ့အချိန်ကို (၁)နှစ်စီ ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီး ချရေးပါ။ (၁)နှစ်မှာ … Read more
ဘိန်းမုန့်တစ်ခုကပေးတဲ့ ဘဝ သင်ခန်းစာ…
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် မနက်တိုင်း ဘိန်းမုန့် ဖုတ်ရောင်းပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေ လည်း နံနက်စာအဖြစ် ဘိန်းမုန့်ပဲ စားကြပါတယ်။ နောက်ပြီး မနက်တိုင်း မနက်တိုင်းမှာဘိန်းမုန့် တစ်ချပ် အပိုဖုတ်ထားပေးပြီး ပြတင်းပေါက်မှာ တင်ထားပေးပါတယ်။ သူမ အလုပ်မအားလပ်တဲ့အချိန်ရောက်လာရင် သူ့ဘာသာယူသွားနိုင်အောင်လို့ပေါ့။သူမ သတိထားမိတာက ထိုအဖိုးကြီး မုန့်လာယူတိုင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းတောင်မပြောဘဲ မုန့်ယူပြီးပြန်ထွက်သွားတိုင်းအောက်ပါအတိုင်းရေရွတ်ပြောပြောသွားတယ်။ ” အကုသိုလ်ပြုရင် ဒုက္ခရောက်ပါစေ၊ ကုသိုလ်ပြုရင် ကောင်းကျိုးခံစားရပါစေ ” နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း အဖိုးကြီးမုန့်လာယူတဲ့အခါ အဲ့ဒီလို ပဲ ရွတ်ရွတ်သွားတဲ့ အတွက် မုန့်ကျွေးရတဲ့ မိန်းမကြီးလည်း ဒေါကန်လာတာပေါ့။ ” ဟင်း . . ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်လုံးတောင်မပြောဘဲ ဒီစကားတွေပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ရွတ်နေတယ်။ ဒါ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ မသိဘူး။”သူမတစ်ယောက်ထဲ ရေရွတ်နေမိသည်။ … Read more
အရိုးကျိုးအတွက် မယုံရင်လာခဲ့ပါ ရိုက်ချိုးပြီး (၃)ရက်နဲ့လုံးဝ ပြန်ဆက်ပြမယ်
”အရိုးကျိုးအတွက်မယုံရင်လာခဲ့ပါ ရိုက်ချိုးပြီး၃ ရက်နဲ့လုံးဝ ပြန်ဆက်ြပမယ်တဲ့” (ရင်းနောင်းပင်)” ကျွန်တော့်အား တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးတစ်ချို့ အမြင်ကပ်ကြတယ်ဗျ။ ဟဲဟဲ ….ကပ်တာကသူတိူ့အလုပ် ဆေးကုရမှာက ကျွန်တော့်အလုပ် ဘာဖြစ်ဖြစ်က်ုယ့် အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာပါပဲ” အရိုးကျိုးတဲ့လူ ၃ ရက်နဲ့ လုံးဝ ပြန်ဆက်စေရမယ်။ မယုံရင်လာခဲ့ပါ ရိုက်ချိုးပြီးပြန်ဆက်ပြမယ်။ လမ်းဘေးဆေးပင်နဲ့ပဲဆက်ပေးမယ်။ အဲ့ဒါ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးးးပဲ။လျှို့ဝှက်ထားတဲ့နည်းကို ကူတို့ဆိပ်မှာ မှိုအိတ်ဖွင့်သလို လုပ်လိုက်တော့ တန်ဘိုးမဲ့တာပေါ့။ တန်ဘ်ိုးထားသူတွေအတွက်ပါ။ဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ပါ အသပြာဆရာတွေအတွက်မဟုတ်ပါ။ ပုံထဲကဆေးပင်ကို ထောင်းပြီး စည်းထားလိုက်ပါ …မကိုက်ဘူး…. မနာဘူး …တစ်ညတည်းဆက်တယ်(လက်တွေ့) ၃ရက်ဆိုတာက ပိူကောင်းအောင်ဆက်စည်းခိုင်းတာပါ။ကျန်းမာကြပါစေ။ ၃ရက်ကြာလျှင် ပြန်ဆက်ပါမည်။ #Credit orginal writer Unicode Version ”အရိုးကြိုးအတှကျမယုံရငျလာခဲ့ပါ ရိုကျခြိုးပွီး၃ ရကျနဲ့လုံးဝ ပွနျဆကျွပမယျတဲ့” (ရငျးနောငျးပငျ)” ကြှနျတေျာ့အား တိုငျးရငျးဆေးဆရာကွီးတဈခြို့ အမွငျကပျကွတယျဗြ။ ဟဲဟဲ ….ကပျတာကသူတိူ့အလုပျ … Read more
မန္တလေးမှ ကားလာဝယ်သော ဝယ်သူနှင့်ဈေးတည့်ပြီး ဝယ်သူမှငွေချေ၍ မောင်းသွားမည်ဟုပြောသောအခါ
၂ လအတှငျး ဆံပငျ ၅လကျမအထိ အရှညျမွနျလာစတေဲ့ ဆံပငျထိနျးသိမျးနညျး
၂ လအတွင်း ဆံပင် ၅လက်မအထိ အရှည်မြန်လာစေမယ့် ဆံပင်ထိန်းသိမ်းနည်း သင်က ၂ လအတွင်း ဆံပင်ကို နဂိုထက် ပိုမြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအကြောင်းအရာက သင့်အတွက်ပါပဲ။ ဆံပင်က အရှည်မြန်ဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်။ လုံလောက်တဲ့ အာဟာရ စားသောက်မှု ပုံစံ နဲ့ ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်ပေးမှ ဆံပင်အရှည်မြန်မှာပါ။ သင်က ဆံသား ဂရုစိုက်မှု နဲ့ ဆံပင်ပိုရှည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်း (၂) မျိုးပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့- ဆန်ဆေးရည် လိမ္မော်သီးအခွံ ပြုလုပ်ပုံကတော့ ဆန်ကို အညစ်ကြေးတွေ ပါသွားအောင် ရေဆေးပေးရပါမယ်။ နှစ်ခါ ဝန်းကျင်လောက် ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်တဲ့ပမာဏ တစ်ခွက်စာကို စစ်ထုတ်ပေးရပါမယ်။ ဆန်ဆေးရည်ကို အကြည်ပုံစံ ရသွားတဲ့အထိ … Read more
မြန်မာဆိုင်တွေဖွင့်ကာစပဲ ရောင်းကောင်းပြီး ကြာရင် အရင်းပါပြုတ်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းအမှန်
မွနျမာဆိုငျတှေ ဖှငျ့ကာစပဲ ရောငျးကောငျးပွီး ကွာရငျ အရငျးပါ ပွုတျသှားရတဲ့ အကွောငျးရငျးအမှနျ မွနျမာတှေ ဘာကွောငျ့ ဆိုငျပွုတျသလဲ ဖတျကွညျ့နျော… လူမြိုးခွားတှေ ဆိုငျလုပျငနျး လုပျကွတယျ။ လေး ငါးနှဈကွာတဲ့အခါ… ဆိုငျခှဲတှေ ထပျဖှငျ့နိုငျတယျ။ လုပျငနျးအထိုငျကွလို့ ဆယျ့ငါးနှဈလောကျကွာရငျ ဆိုငျခှဲ အနညျးဆုံး သုံးခုဖွဈသှားပွီ။ မွနျမာဆိုငျနဲ့ ဘေးခငျြးယှဉျလာဖှငျ့ရငျ မွနျမာဆိုငျဟာ သိပျမကွာခငျ ပွုတျပွီး ပွေးရပွီ။ ကြှနျတျောဟာ… လှနျခဲ့သော နှဈသုံးဆယျလောကျက အရောငျးအဝယျ ကောငျးတဲ့ ဆိုငျတဈဆိုငျမှာ ပညာသငျအလုပျသမားအဖွဈ ဝငျလုပျရငျး လလေ့ာကွညျ့မိတယျ။ ၁။အလုပျခြိနျတိကတြယျ။ ဆိုငျပိတျခြိနျ တဈခါတဈရံမှသာ နောကျကတြယျ။ နယျအျောဒါမြားလို့ ဒီနဝေ့ငျတဲ့အျောဒါ ဒီနအေ့ပွီး ထုတျတယျ။ နကေူ့းရငျ နောကျနအေ့ျောဒါတှေ ထပျပွီး ဂမျြးမဖွဈစဖေို့ပါ။ ၂။ သူဌေးက အစ အလုပျသမား အဆုံး … Read more